Fitaovana SPL ho an'ny indostrian'ny solika, gazy & fitrandrahana
Ny loharanon-karena angovo lehibe indrindra misy ankehitriny dia ny solika sy gazy voajanahary. Nanjary ilaina amin'ny fisian'ny olombelona sy ny fivelomany ankehitriny amin'ny fiainana maoderina. Ary koa ho loharanon'ny angovo lehibe manerantany, manome ny akora ho an'ny vokatra isan'andro anarivony izy ireo - manomboka amin'ny fitaovana elektronika sy fitafiana ka hatramin'ny fanafody sy ny mpanadio trano.
Ny rano sy angovo no tena mpamily ho an'ny indostrian'ny solika sy gazy, raha tsy misy izany dia tsy azo atao ny mamoaka, mamokatra ary mizara solika sy gazy hamaranana ny mpanjifa. Noho izany, iharan'ny fitsipi-pitenenana miha henjana izy io izay mikendry ny fanatsarana ny dian'ny tontolo iainana mandritra ny fitrandrahana, ny famokarana ary ny fizarana. Firenena maro eran'izao tontolo izao ihany koa no nametraka lalàna hanakanana ny entona fandotoana sy ny loto ateraky ny rivotra, ary ny refinera kosa dia manangana fahafaha-manao mifanaraka amin'ny takiana amin'ny solika solifara ambany.
Manomboka amin'ny fitrandrahana - an-dranomasina sy an-dranomasina - ka hatramin'ny fanadiovana, fanodinana, fitaterana ary fitehirizana, ny SPL Products dia manana vahaolana hamindrana hafanana mety tsara manerana ny rojomara karbonika. Ny vokatray sy ny fahalalinan'ny manam-pahaizana dia manampy ny mpanjifa amin'ny indostria solika sy etona hitahiry angovo, hampitombo ny fahombiazany ary hampihena ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana.